श्रीमती र छोरी भेट्न हङकङ जाने योजनामा थिए, कोरोनाले लियो ज्यान :: Setopati
श्रीमती र छोरी भेट्न हङकङ जाने योजनामा थिए, कोरोनाले लियो ज्यान गण्डकीमा निको भए ९० प्रतिशत
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, साउन २५
पोखरा-१९ का ६२ वर्षीय पुरुष ज्वरो, रूघाखोकीले ग्रस्त भएर आफैं अस्पताल गए। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा साउन १६ गते भर्ना हुन पुगेका उनको स्वाब निकालेर कोरोना परिक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ आयो। त्यसपछि अस्पतालकै आइसोलेसनमा बसे।
उनी मधुमेहका बिरामी थिए। उनलाई आइसोलेसनमै राखेर अस्पतालका चिकित्सकले निगरानी गरिरहेका थिए। शनिबार राति साढे ११ बजे उनको निधन भएको निर्देशक अचार्यले बताए।
उनी पोखरास्थित घरमा एक्लै थिए। उनका श्रीमती र २ छोरी हङकङमा छन्। उनी पनि हङकङ जाने तयारीमा रहेको पोखरा-१९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले बताए।
‘लकडाउन हुँदैनथ्यो भने उनी यतिबेला हङकङ पुगिसकेका हुने थिए सायद,’ पौडेलले भने।
एक्लै बसेका उनले घरमै सच्चाइ चलाएका थिए। सच्चाइमा विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरू जम्मा भएर भजनकिर्तन गर्ने गर्छन्। बिरामी हुनुभन्दा अघिसम्म पनि उनले घरमै सच्चाइका अनुयायीलाई बोलाएर भजनकिर्तन गर्थे। सच्चाइका प्रमुखकै भूमिकामा काम गरेका उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा आएका अरूको पनि स्वाब परिक्षण गरियो।
कन्ट्याक्ट टेसिङका क्रममा उनका सम्पर्कमा आएका ६ जनालाई पनि कोरोना देखियो। उनीहरू ६ जना नै सच्चाइमा नियमित जाने गर्थे। संक्रमण देखिएका ६ जनामध्ये २ जना पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी ४ जनालाई लेखनाथस्थित संक्रामक अस्पतालको आइसोलेसन लैजाने तयारी गरेको वडा अध्यक्ष पौडेलले बताए।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन वडाका केही ठाउँ सिल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। संक्रमण देखिएको ठाउँ पोखराको वडा नं. १६ र १९ नजिकै पर्छ। दुबै वडाध्यक्षले पोखरा महानगरबाट सिफारिस लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सिल गर्ने प्रस्ताव लैजान लागेको पौडेलले बताए। उनका अनुसार लामाचौर चोक, भक्तिपथ, सहरडहर, भण्डारी डहर, गैरीखोर, गैह्राबारीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा आवत-जावतमा कडाइ गर्ने तयारी छ। बाँकी ६ जनामा कोरोना देखिएपछि उनीहरुका पनि कन्ट्याक्ट टेसिङ हुँदैछ।
मृतकको शव पोखरा ३२ को रातापैह्रामा व्यवस्थापन भइसकेको छ। यसअघि स्याङ्जाका संक्रमित पोखरामा उपचार गराउँदा मृत्यु भएपछि सोही स्थानमा संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीयले अवरोध गर्दा प्रहरीले हवाई फायरसम्म गर्नुपरे पनि यसपटक भने कसैले अवरोध नगरेको प्रहरीले बताएको छ।
पोखरामा यसअघि २ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। पोखरा निवासी संक्रमितको मृत्यु भएको भने पहिलो पटक हो। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसका कारण ५ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
निको भए ९० प्रतिशत
गण्डकी प्रदेशमा लकडाउन भएयता भारतबाट १२ हजार २ सय ९१ जना फर्किए। यस्तै भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट ५ हजार १ सय ४ जना फर्किएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। भारत र अन्य देशबाट हालसम्म फर्किका १७ हजार ३९५ जना फर्किएका छन्। उनीहरु सबैको पिसिआर परिक्षण गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर बिनोदबिन्दु शर्माले बताए।
हालसम्म कोरोना परिक्षणका लागि २८ हजार ४ सय १४ जनाको नमुना संकलन भएको छ। संकलित नमुनाको कोरोना परिक्षण गर्दा २६ हजार ८ सय २ जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने १ हजार ६ सय १२ जनालाई संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये १ हजार ४ सय ५९ जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा देखिएका संक्रमित मध्ये ९०.५० प्रतिशत निको भएको निर्देशक डा. शर्माले बताए। गण्डकी प्रदेशमा अझै क्वारेन्टिनमा ९ सय ५५ जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा १ सय ४८ जना बसेका छन्।
नसुल्झिएको मस्जिद तोडफोड प्रकरण
त्रिविका आंशिक लेक्चररले सके कोर्स, पाएनन् वर्ष दिनसम्म ज्याला
श्रीमतीको हातबाट पनि दसैंको टीका लगाउन हुन्छ त!
यसपालि तिहारमा छैन पर्याप्त फूल
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू दिनहुँ खुमलटारमा
महानिरीक्षक थापाद्वारा सुडान मिसनमा खटिने प्रहरीको बिदाइ
राजविराजबाट छ्याङ्गै देखिएको हिमाल (तस्बिरहरू)
काठमाडौं उपत्यकामा १८८८ नयाँ कोरोना संक्रमित
थपिए ३५१७ जना कोरोना संक्रमित, १६ जनाको मृत्यु
बुवाले गराइदिए छोराको चौरासी पूजा
म्याग्दीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, घाइतेमध्ये तीन जनालाई हेलिकप्टरबाट पोखरा लगिँदै
अचेल दसैं न चंगा भएर आउँछ, न खसी भएर किरणकृष्ण श्रेष्ठ
दसैँ: इमरजेन्सी वार्डमा बितेको त्यो अनिदो रात अच्युत शाली घिमिरे
देख्दैछु म विशव दाहाल
साइँली प्रज्ञा निरौला